Is Distilled Mvura Yakanaka Kune Hove - BikeHike
musha » zvakasiyanasiyana » Is Distilled Mvura Yakanaka Kune Hove
Hove dzinogona kurarama mumvura yakadirwa here?
Ndeipi mvura yakanakira hove?
Ndeipi mvura yemubhodhoro isina njodzi kuhove?
Mvura yekunwa yakacheneswa haina njodzi kuhove here?
Mvura yakagayiwa yakanaka kune goldfish here?
Ndingashandisa mvura yakadirwa pahove dzebetta?
Mvura yechitubu kana yakadirwa mvura iri nani patangi rehove?
Zvinotora nguva yakareba sei kuti mvura yemupombi ive isina njodzi kuhove?
Mvura yakacheneswa kana yakanyungudutswa iri nani here?
Ndeipi mvura yakanaka kune goldfish?
Unogona here kushandisa mvura yemubhodhoro kugadzira hove tank?
Unoita sei kuti mvura ive isina njodzi kuhove?
Mvura yakasvibiswa ine chlorine here?
Ini ndinorangarira sei RO mvura mune yangu aquarium?
Mvura yakadirwa yakanakira matangi emvura yemunyu here?
Goldfish inogona kugara mumvura ine chlorine here?
Unogona here kunwa mvura yakasvibiswa?
Mvura yakasvibiswa inoshandiswa chii?
Ndinofanira kumirira nguva yakadii kuti ndidzosere hove dzangu mutangi mushure mekuchenesa?
Kangani paunoshandura mvura mutangi rehove?
Imhandoi yemvura inoda betta fish?
Iwe haufanirwe kushandisa mvura yakasvibiswa pakuchinja kwemvura mutangi rako rehove. Hove nezvirimwa zvakafanana zvinoshandisa zvicherwa mumvura, umo vanhu vanogona kuwana zvese zvavanoda kubva muchikafu. Kwete izvozvo chete, asi zvicherwa zvinodzora uye KUSIMBISA iyo pH mazinga mumvura. Kunyangwe zvishoma pH swing inogona kuuraya hove.
Matangi ehove haafaniri kuzadzwa nemvura yakasvibiswa nokuti zvicherwa zvinobviswa mairi. Zvicherwa zvakaita se iron necalcium zvinobatsira kuti hove dzikure. Pamusoro pezvo, nekuti hove dzine semi-permeable membranes, hove dzinogona kusangana nekukuvara kunouraya mumvura yakachena, yakasvibiswa.
Aquarium Mvura Zvitubu zveMunicipal Tap Mvura. Zvichida nzira iri nyore yekupa hove dzako imba ine mvura ndeyekuvhura pombi. Mvura Yakanaka. Kana imba yako iine mvura yetsime, mvura yacho haizove neklorini. Mvura Yemabhodhoro. Mvura inonaya. Distilled Mvura. Reverse Osmosis (RO) Mvura. Deionized (DI) Mvura.
Ita shuwa kuti mvura haina distilled, demineralized, flavored kana ionized. Inofanira kuvharwa patsime, isina carbonated, yemvura yakasikwa yechitubu. Reverse osmosis mvura inogona kunge isina kuchengetedzeka kuhove nekuti yakasefa, uye zvimwe zvemamineral zvemukati zvinenge zvaburitswa mukuita.
Mvura yakasvibiswa kana yakacheneswa, yakasiyana zvikuru nemvura yepombi yenguva dzose nokuti yakagadziridzwa kubvisa makemikari ose, zvicherwa, uye kudya, kukusiya usina chinhu kunze kwemvura yakachena. Iyi mhando yemvura ye betta hove haina kukurudzirwa.
Kuisa hove yegoridhe mumvura yepombi ine chlorinated, mvura yemubhodhoro kana yakanyungudutswa, kana mvura yakanyanyisa acidic kana alkaline, inogona kuuraya, akadaro Ponzio. Goldfish, nhengo dzemhuri yecarp, dzinobudisa tsvina yakawanda, saka iwe uchadawo hurongwa hwekusefa. Tsvina ine ammonia, iyo ine chepfu kwavari.
Mvura yakanakisa yekuwedzera kune tangi yako imvura yepombi, chero bedzi yakarongedzwa kutanga. Kana zvisina kudaro, iwe unofanirwa kuedza kushandisa mvura yechitubu. Iwe unofanirwa KUGARA uchidzivirira mvura yakacheneswa kana yakasvibiswa, sezvo ichishaya mamineral anodiwa uye chikafu chinodiwa nebetta yako kuti urarame. Zvinowanzobatsira kushandisa stress jasi additive.
Kana iwe uchida kudzika iyo nzira yakasvibiswa / RO inosarudzwa, asi izvi zvinofanirwa kudzokororwa. Ndiri nyanzvi yezvipenyu zvemugungwa uye ndakaita chiyedzo ichi nekusaziva nezve toxicology bvunzo pahove. Mvura yakagayiwa yoga mumudziyo wakachena zvikuru inouraya hove nokukurumidza. Hakusi kushaikwa kwezvicherwa zvakananga.
Nguva dzose rega mvura yemupombi igare kwemaawa makumi maviri nemana kuitira kuti chlorine ive nemukana wekubuda. Kana kuti unogona kurapa mvura neimwe kemikari kana usingakwanisi kumirira.
Mvura yakanatswa inowanzo kuve sarudzo yakanaka sezvo yekuchenesa inobvisa makemikari uye tsvina kubva mumvura. Iwe haufanire kunwa mvura yakasvibiswa nekuti inoshaya zvicherwa-zvinowanzoitika, kusanganisira calcium uye magnesium, iyo inobatsira kune hutano.
Goldfish ihove dzemvura inotonhora, zvinoreva kuti haidi heater. Goldfish inosarudza mvura yavo pakati pe62 ne72 degrees Fahrenheit. Zvakare, goldfish inoita zvakanaka mumvura yakapfava, zvichireva kuti alkalinity yayo yakakwirira kudarika acidity yayo. Hove yegoridhe inokura kana pH yemvura yavo iri pakati pe7.0 ne7.4.
Semuenzaniso, imwe mvura yemubhodhoro ichiri kuda kubviswa chlorine. Uye nekuti mvura yemubhodhoro yakagadzirirwa kuti tinwe, inowanzodhura zvakanyanya pane kungoshandisa mvura yakadirwa. Ini ndinongokurudzira kushandisa mvura yemubhodhoro semvura yetangi rehove mune emergency, kana pasina chimwe chiripo.
Vapfuri vehove vanogona kuita kuti mvura yemupombi ive yakachengeteka kuhove dzavo nekufanoigadzira nemushonga wemvura wemvura, unowanikwa kubva muchitoro chemvura kana chitoro chemhuka. Sarudza chigadzirwa chakaita seStressCoat (yakagadzirwa neAPI) chinobvisa chepfu ipapo ipapo chlorine nechloramine pamwe nekusunga chero simbi inorema.
Mvura yakasvibiswa ine chlorine here? Kuzvitaura zviri nyore, NO! Durastill Distilled Mvura HAINA chlorine. Asi kunatswa kwemvura yemhando yakaderera hakuna kukwanisa kubvisa nekusefa chlorine.
Musanganiswa wecalcium chloride, Epsom munyu, uye pasoda yekubikira inoita zvishamiso kuyeuchidza RO mvura yetangi rako rehove. Kuti uwane mamwe maitiro akakwenenzverwa, tinokurudzira kuisa remineralizing cartridges kutangi yako.
Dambudziko nemvura yakasvibiswa nderekuti yakanyanya kuchena kune zvipenyu zvegungwa. Zvinoitika kuti hove dzinoda zvinopfuura hydrogen uye oxygen kumamorekuru kuti ararame. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kudzivisa kushandisa mvura yakasvibiswa, kunyanya paunenge uchishandura mvura mumvura yako yemunyu.
Chlorine inoparara pakarepo mushure mekusangana nemhepo uye chloramine/ammonia inotorwa nemarasha media musefa yako. Hove dzako dzakanaka uye dzinofanira kurarama hupenyu hurefu nekutarisirwa kwakakodzera. Goldfish inogona kurarama makore anopfuura gumi (avhareji) mukutapwa. Kutaura zvazviri, mukurusa akanyorwa aiva nemakore 10.
Mvura yakasvibiswa yakachengeteka kunwa. Asi iwe ungangoiwana iri yakati sandara kana bland. Imhaka yekuti yakabviswa zvicherwa zvakakosha secalcium, sodium, uye magnesium inopa mvura yemupombi kunaka kwayo kunozivikanwa. Izvo zvasara ingori hydrogen uye oxygen uye hapana chimwe chinhu.
Kushandiswa kwemvura yakasvibiswa kwaisanganisira kugadzira ice cubes, soup, kofi, tii, pasta, mupunga, mukaka wemwana, muto, Kool-Aide®, kana kungonwa mvura ine hutano. Nehurombo, izvo zvinosvibisa zvinowanikwa mumvura yepombi zvichiri kuwana nzira yavo kupinda mumuviri wako kunze kwekunge iwe uchigara uchishandisa yakachena yakasvibiswa mvura.
Kana zvisina zvakawanda zvachinja muaquarium, unogona kudzorera hove dzako maawa makumi maviri nemana mushure mekunge waisa zvese zvishandiso, zvekushongedza, uye zvidyarwa mutangi.
Hove dzeBetta dzichabudirira mumvura ine "neutral" pH ye7.0. Yakawanda yepombi yemvura pH inowira mukati mehuwandu hwe6.5 kusvika 7.5. Zviri nyore kugadzirisa tembiricha yakananga kunze kwepombi kuenda kune yakanakisa renji yehove dzako.
Iyo Distilled Mvura Yakanaka Kune Betta Hove
Mhinduro Yekukurumidza: Inogona Kufema Hove Mumvura Yakanyungudika
Iyo Distilled Mvura Yakachengeteka Kune Hove
Mhinduro Yekukurumidza: Zvakanaka Kupa Imbwa Mvura Yakanyungudika
Mhinduro Yekukurumidza: Imbwa Dzinogona Kunwa Mvura Yakasvibiswa
Imbwa Inogona Kuve Mvura Yakanyungudika
Zvakanaka Kupa Imbwa Yako Mvura Yakanyungudika
Mubvunzo: Ko Hove Inogona Kugara Mumvura Yakasvibiswa
Inogona Betta Hove Kupona Mumvura Yakanyungudika
Inogona Kushandiswa Mvura Yakanyungudutswa Kune Hove
Mubvunzo: Unogona Kushandisa Mvura Yakanatswa Kune Hove
Mubvunzo: Mvura Yakanyungudutswa Yakanakira Betta Hove
Previous Post: Mubvunzo: Mvura yeBetta Hove Inoda Kudziya Sei?